यो फूलले दिन्छ क्यान्सर, सुगर जस्ता खतरनाक रोगबाट छुटकारा, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग – Sandesh Press
March 31, 2021 141
काडमाडौँ । सदाबहार फूल :Catharanthus roseues परिवारमा पर्ने यस फूललाई नेपालीमा सदाबहार फूल स‌‌‍स्कृतमा नित्य कल्याणी वा सदा पुष्प र अ‍ग्रेजीमा Rose Periwinkle or Old maid भनिन्छ।
मैदाले बनेको रोटी,पास्ता र मःम खानुहुन्छ ? सावधान ! हुन सक्छ मानसिक…
भिटामिन बि–६ र बि–१२ अत्याधिक भएमा शरीरमा हुन्छ हिप फ्याक्चरको समस्या
Prevघर बनाउँदा यस्ता कुरामा सँधै ध्यान दिनुहोस्, सदा हुनेछ घरमा लक्ष्मीको बास
Nextनेपाली चेली सृजना राना मगर अमेरिकन आर्मिको उच्च पदमा छनोट हुन सफल !
एकाबिहान आयो दु:खद खबर : बसको ठ’क्क’रबाट पैदलयात्री कमला देवकोटा को मृ’त्यु !